किन हुन्छ प्रेम असफल ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← मलेसियामा अवैध कामदारलाई वैध हुन पाउने योजना
विश्वको सबैभन्दा गन्हाउने मान्छे !! →
करिब दुई वर्षअघि कीर्तिपुरको चोभारमा एक युवकले प्रेमिकाले अर्कैसँग विवाह गरेको निहुँमा प्रेमिकालाई गोली हानेर आफ्नै पनि कञ्चटमा गोली हानेर आत्महत्या गरे । मकवानपुरका सिपाही राजकुमार न्यौपानेले प्रेम अस्विकार गरेको निहुँमा एक युवतीको छुरा प्रहार गरी हत्या गरे र तिनै युवतीको कोठामा आत्महत्या गरे । गुल्मीमा एक युवकले आफ्नी प्रेमिकालाई गोली हानेपछि आफूलाई पनि गोली हाने तर संयोगले कुनै अप्रिय दुर्घटना भएन ।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् जसले प्रेममा पागल भएको मान्छे प्रेम असफल भएपछि कस्तो बाटोमा लाग्छ भन्ने देखाउँछ। एकतर्फी प्रेममा फसेकाहरू आफूले मनपराएको मानिसलाई आफ्नो कुरा भन्नै नपाइ उसले अर्कै बाटो लाग्दा वा अस्वीकार गर्दा अथवा कुनै कारणले दुईतर्फी प्रेममा समेत खटपट आउँदा प्राणत्यागसम्मको बाटो रोज्छन्। प्रेममा असन्तुष्ट भएर वा प्रेमी प्रेमीकाबीच मनमुटाव वा अपरिपक्कताका कारणसमेत सम्बन्ध टुट्ने गरेको छ। प्रेमको असफलता कहिलेकाहीँ सामान्य रूपमा साम्य हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यसले निकै भयानक परिणाम ल्याउँछ।
प्रेम किन असफल हुन्छ ?
महात्मा गान्धीले भनेका छन्, मूर्खको औषधी प्रेम हो। प्रेममा परिवर्तनको क्षमता हुन्छ। भौतिक होइन आत्मिक अनुभव हो प्रेम। प्रेमको न कुनै सीमा हुन्छ न समय र भूगोल। प्रेम जुनसुकै बेला जोसँग पनि हुनसक्छ। प्रेम कसैसँग चाहना गरेर हुदैन मानिसको आनिबानी व्यक्तित्वआदिले कसैलाई मोहित गरेर वा भावनामा डुबेर प्रेम हुन्छ। मानिसलाई यो धर्तीमाशान्ति र अहम बिनानै बाँच्न र सुन्दर जीवनको कल्पना गर्न प्रेमले नै सिकाउँछ। प्रेममा त्यस्तो शक्ति हुन्छ जसले जीवन निर्वाहका लागि अमृतको काम गर्छ। एकअर्काबीचमा विश्वास अनि भावनात्मक सम्बन्ध रह्यो भने प्रेम सफल हुन्छ। कसैकोबाहिरी बनावटले आकर्षण गरेर प्रेम भयो भन्नु मुर्खता सिवाए केही होइन। मस्तिष्ककोअनुरोध अनि मनको चाहनाबाट उत्पन्न भावना नै प्रेम हो।
कसैको यौवन वाजवानीको मोहमा परेर उसको यौन तृष्णा मेटाउन गरिने केही दिनको काल्पनिक नाटकलाईप्रेम भन्न मिल्दैन। पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताको प्रमुख समस्या भनेको प्रेम असफल हुनु हो। कलेज जीवनमा व्बाइफ्रेन्ड र गलफ्रेन्ड भएन भने असहज मान्नेहरूको जमात
बढ्दो छ। शारीरिक आकर्षकलाई केन्द्रमा राखेर देखासिखि मानसिकताले उत्प्रेरित भएर प्रेम गर्ने हो भने त्यो प्रेम सफल हुँदैन। युवा- युवतीबीचको शारीरिक आकर्षकले केही दिन सम्बन्ध सुमधुर भए पनि बिस्तारै खटपट उत्पन्न हुन थाल्छ।
प्रेम असफल हुनुको अर्को कारण एक अर्कामा वैचारिक मतभेद हुनु हो। घरपरिवार आफन्त र समाजको रितिरिवाज मर्यादा एवं संस्कारको ख्याल नगरी गरिएको प्रेम असफल हुन्छ। कुनै समयमा प्रेम सार्वजनिक भएपछि समाजले स्वीकार नगर्ने अवस्थामा प्रेमबाट अलग हुन सक्ने गरी सम्बन्ध बढाउनुनै उचित हुन्छ। प्रेमी-प्रेमिकाले एक अर्कालाई गुमाउँदा कुनै अप्रिय दुर्घटना नहुने गरी प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेम दुवै जनाको मनैदे खि उत्पन्न हुनुपर्छ तब मात्र प्रेमी र प्रेमीकाको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ।
एकतर्फी प्रेमले दुवै जनाको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्न सकिँदैन। आत्मादेखि नै गरिएको चाहना नै प्रेम हो। मनदेखि नै गरिएको आत्मिक अनुभव बिनाको प्रेमले जटिल समस्या निम्ताउन सक्छ। एक अर्काबीचको दूरी बढेर बिछोड हुँदा उत्पन्न हुने आवेगलाई कावुमा राख्न नसकी आत्महत्या, लागू पदार्थ दुव्र्यसनतर्फ धकेल्ने युवा पुस्ताको प्रमुख समस्या बन्दै
आफूले रोजेको मानिससँग सम्बन्ध बिग्रिए पछि, मनको कुरा खोल्न नपाई अर्कोबाटो रोजेका कारण वा प्रेममा असन्तुष्ट भएर प्रेमी वा प्रेमीकाले आत्महत्या वा दुव्र्यसनको बाटो समात्छन्। प्रेमका कारण बीचैमा पढाइ छाड्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। भनिन्छ- प्रेम सञ्जीवनी बुटी हो जसलाई चिन्न र ग्रहण गर्नसके यसले जीवनलाई सुन्दर बनाउनुका साथै जीवन-निर्वाहमा अमृतको काम गर्छ, तसर्थ प्रेमी-प्रेमीकाले प्रेमबाट धेरै अपेक्षा नराखी सम्बन्ध बढाउनु नै उपयुक्त हुन्छ।
Posted by: Narayan Nepal Source: Saptahik
This entry was posted in जीबनशैली, बिचार/बिमर्श. Bookmark the permalink.